Sina Herinaratra elektrika, kasety mpanohana ny fandoroana, kasety PVC, ozinina fanamafisam-peo ary mpanamboatra | Boda
Tape elektrika, na Kasety adhesive insulateur elastika PVC, fantatra koa amin'ny hoe tape adhesive insulation electrique na kasety insulation. Azo hafoina toy ny: kasety elektrika PVC, kasety PVC sns. Ny kasety elektrika dia misy insulation tsara, fanoherana ny lelafo, fanoherana ny herinaratra, fanoherana hatsiaka ary toetra hafa. Izy io amin'ny ankapobeny dia mety amin'ny famolavolana tariby, ny insulation ary ny fametrahana karazana motera sy elektronika isan-karazany toy ny mpanova, môtô, capacitor, regulator amin'ny herinaratra, sns. Misy kasety mena, mavo, manga, fotsy, maitso, mainty, mangarahara ary hafa loko. Inona no atao hoe kasety elektrika ary inona no fampiasana azy??
Dingana famokarana kasety elektrika:
Miorina amin'ny sarimihetsika PVC izy io ary avy eo mifono adhesive mora tohina amin'ny fingotra.
Tanjon'ny kasety elektrika:
Amin'ny ankapobeny dia mety amin'ny insulation ny faritra fanoherana isan-karazany. Ohatra, ny fifandimbiasan'ny tariby, ny fanamboarana ny simba, ny transformer, ny motera, ny capacitor, ny mpanara-maso ary ny karazana motera hafa, ny faritra elektronika amin'ny anjara asan'ny fiarovana. Mandritra izany fotoana izany, dia azo ampiasaina amin'ny famehezana, fanamboarana, fikolokoloana, fanamboarana, famehezana ary fiarovana amin'ny fizotry ny indostria.
Ny kasety elektrika dia manondro ilay kasety ampiasain'ny elektrisianina hisorohana ny famoahana herinaratra sy ny insulateur. Izy io dia manana fampisehoana insulated tsara, retardant amin'ny lelafo, fanoherana herinaratra avo lenta, fanoherana ny hafanana avo, elastika mihena mafy, mora rovitra, mora miolaka, mahazaka afo, mahazaka toetr'andro tsara sns. Ho fanampin'izany, ny fampiharana kasety elektrika dia tena midadasika ihany koa. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny insulation ny tariby sy ny tadin'ny tariby ambanin'ny 70 ° C, ny famantarana ny loko, ny fiarovana ny tranony, ny famehezana ny fantsom-pifandraisana, sns.
Fampiasana sy fitehirizana kasety elektrika:
Rehefa mampiasa kasety elektrika isika dia tsy maintsy fonosina amin'ny antsasaky ny overlap. Mba hanaovana ny fanamiana miolakolaka sy milamina ary tokony hampiharana fihenjanana ampy. Ankoatr'izay, amin'ny karazana fifangaroana mifanila dia tokony fonosina manodidina ny faran'ny tariby ny kasety elektrika ary aforitra miverina hamela paosy vita amin'ny fingotra, mba hisorohana ny famakivakiana. Rehefa mamonosina ny sosona farany amin'ny kasety elektrika dia tsy tokony ahinjitra izany hisorohana ny fisarihana ny saina. Mba hitazomana ny fahombiazan'ny asany, ny kasety elektrika dia tokony hotehirizina ao anatin'ny mari-pana sy ny toetr'andro.
Ny kasety elektrika BOSENDA, vita amin'ny akora kilasy voalohany, dia manana firaiketam-po sy fiantohana lanja tsara. Tsy mitovy amin'ny kasety elektrika tsotra eny an-tsena, izay tsy ampy ny viscosity, ary matetika dia tsy mety ny valiny aorian'ny fampiasana azy. Ny horonantsarinay dia nosedraina mafy, manomboka amin'ny fisafidianana ireo akora, ny famokarana ny rohy tsirairay, dia voafehy tsara. Hamarino tsara fa afa-po ny mpanjifa rehefa voaray. Ny mpanjifa dia avy any amin'ny afovoany Est, Eoropa Atsinanana, Amerika atsimo ary firenena EU.
Previous: Grinder zoro, fandavahana fiatraikany, tantanana, fandavahana li-ion, fitaovana mandeha amin'ny herinaratra
Manaraka: Masinina welding, milina fantsom-pifandraisana DC, milina fantsom-bozaka AC, saron-tava fantsom-bozaka, kojakoja fanjairana
Tape Pvc elektrika